Sina pp mpamorona boaty loaka mpamokatra sy mpamatsy | Sihai
Ny takelaka mihombo Pp dia be mpampiasa amin'ny dokam-barotra, ny fampiasana ny p pp ampifangaroharo dia namboarina natao hijoro, boaty fifidianana, talantalana tamin'ny fifidianana, takelaka fanaovana sonia, takelam-pifidianana ary ireo vokatra azo avy amin'ny fifidianana, namboarina ho lasa endrika sy habe ho an'ny hafa matevina, samy hafa loko, taratasy pirinty samy hafa pp hollow.
Ny takelaka mihombo Pp dia be mpampiasa amin'ny dokam-barotra, ny fampiasana ny p pp ampifangaroharo dia namboarina natao hijoro, boaty fifidianana, talantalana tamin'ny fifidianana, takelaka fanaovana sonia, takelam-pifidianana ary ireo vokatra azo avy amin'ny fifidianana, namboarina ho lasa endrika sy habe ho an'ny hafa matevina, samy hafa loko, taratasy pirinty samy hafa pp hollow. Ny valim-pifidianana poakaty Pp dia aondrana any Etazonia, Aostralia, Nouvelle-Zélande ary ireo firenena tandrefana hafa mba hisian'ny fifidianana filoham-pirenena sy governemanta ary fifidianana demokratika.
Isan-taona dia maro ny takelaka fanaovana peratra sy props amin'ny fifidianana izay novokarin'i Shenzhen Sihai. Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny valin'ny talantalana pp hollow?
1. talantalana misy ny fifidianana, miaraka amin'ny laharam-pifidianana, ambanin'ny boaty fandatsaham-bato, latsa-bato. Ny sisiny sy ny tampony dia ampiasaina amin'ny fanontana sy fanaovana doka. Ity talantalana fampirantiana ity dia hita isaky ny fanjakana sy ny distrika mba hanangonana mpifidy ao an-toerana.
2.adopt pp hollow plate mifanaraka amin'ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana RoHS eropeana, izay manana tombony amin'ny maitso, hazavana ary mety, azo averina, sns. Pp hollow sheet dia an'ny vokatra clinker, noho izany dia manana ny mampiavaka ny tantera-drano sy ny moistureproof, fanoherana ny harafo ary sns. Izy io koa dia afaka manao UV miaro mety amin'ny fampisehoana ivelany.
Previous: boaty fanaovana dokambarotra pp hollow
Manaraka: pp boaty mihombo ho an'ny express